မ၀ယ် သင့် သော ဖုန်း အမျိုး စား သစ်ဝင် ရောက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » မ၀ယ် သင့် သော ဖုန်း အမျိုး စား သစ်ဝင် ရောက်
မ၀ယ် သင့် သော ဖုန်း အမျိုး စား သစ်ဝင် ရောက်
Posted by Mobile House on Nov 21, 2011 in Copy/Paste | 17 comments
SGT-SMA2 အမျိုး စား အသစ် ၀င် ရောက် ။
singtech တံဆိပ် ၀င်ရောက် လာ။ စင်ကာပူ ဖုန်း ဆိုပြီး ၀င် ရောက် ။ထိုင်ဝမ် မှာ ထုတ် တာတဲ့ ။ဘာထူး မှာ လဲ ။တရုတ် နည်း ပညာ နဲ့ စင်ကာပူ ဈေး နဲ့ ရောင်းတယ် ။အကုန် စမ်းပြီး ပါပြီ ။တရုတ် ဖုန်း နဲ့ အတူတူ ပါပဲ ။ခု ၀င်နေ တဲ့ ဖုန်း ထဲမှာ ပဲ ကြည့် SGT-SMA2 ဆို android ဖုန်း တဲ့ ။CPU က 400 လောက် ပဲ ရှိ တယ် ။ဂိမ်း အသေးလေး တွေတောင် ထစ်နေတဲ့ ဖုန်း ကို ရောင်းဈေး က 124,000 ကျပ် ရောင်း ပါတယ် ။Samsung android ဖုန်း ဆို ၁၅၀၀၀၀ ကျပ် လောက် ဆို တော်တော် ကောင်းနေ ပါပြီ ။ ၀ယ် မယ့် သူ တွေ ချင့် ချိန် ဖို့ ဒီ Post ကို တင်ပေးလိုက် ပါတယ် ။
ကို black prince ရေ မေးစရာလေးရှိလို့ ပါ။ကျေးဇူးပြုပြီးကူညီပေးပါခင်များ။ခုကျွန်တော်သုံးနေတာက CDMA450 ပါ။
ကိုင်သမျှဟန်းဆက်တွေ တခုမှကိုသဘောမကျလို့ ပါဗျာ။function စုံစုံလင်လင်နဲ့ သုံးကောင်းပြီးလိုင်းဆွဲအားကောင်းတဲ့
ဟန်းဆက်တွေထဲက HUAWEI c810e နဲ့ c830e ကိုသဘောကျပါတယ်။ဈေးကွက်ထဲမှာ ခုက810 ကမရှိတော့သလောက်ရှား
နေပြီး 830 ကလဲ Elite Tech မှာတင် ၅၈၀၀၀၀ လောက်ရှိနေတယ်လေ။အဲဒီတော့ လိုင်းဆွဲအားကောင်းပြီး ဟန်းဆက်ကြီးကြီးတွေထဲ
မှာ ZTE JG500 ခုပေါ်လာပေမယ့် HUAWEI ကိုပိုသဘောကျလို့810 ကိုရှာလို့ မန်းတလေးမှာ ရနိုင်ပေါ့မလား သိချင်လို့ ပါခင်များ။
huawei 810 ကရှားနေ ပါပြီ ။ ဘယ်မြို့ မှာ သုံးမှာလဲ ?yeyintaung777@gmail.com မှာ မေး နိုင်ပါတယ် ။ဒီ ထဲ သိပ် မ၀င်ဖြစ်တော့ ဘူး ဗျ။
ကျနော်တို(့တော) မြို့လေးမှာ မကြာခင် ဂျီသုံးလို့ရတော့မှာမို့ ဂျီကောင်းကောင်းတစ်လုံးလိုချင်ပါတယ်။
လက်ရှိမြန်မာပြည် ဆက်သွယ်ရေးက အသုံးခွင့်ပြုခွင့်ပေးထားတဲ့ စနစ်တွေနဲ့ကိုက်ညီမဲ့ ဖုန်းလေးညွှန်ပေးပါ၊ ဂျီပီအက်လဲ သုံးချင်ပါတယ်၊ အင်တာနက်လဲသုံးချင်ပါတယ်၊ ဓါတ်ပုံကောင်းကောင်းလဲရိုက်ချင်ပါတယ်၊
ဟုတ်တယ်ဗျ..ရွာမှာ ဆိုတော့ ညရေးညတာ မှောင်မှောင်မဲမဲ အတွက်ဆို.
ဓါတ်မီးအဖြစ်လဲ ကောင်းကောင်းအသုံးဝင်တယ် တကယ်လင်းတာနော်…
ကိုအင်ဇာဂီ ရဲ့ အက်ပဲ ပို့စ်ကိုဖတ်ပေမဲ့လည်း..အိုင်ဖုန်းမှ အိုင်ဖုန်းပဲ …:)
ဟုတ်တယ် ။ဒီထဲ မှာ က post တင်ရတာ ခက် တယ်လေ။ ၁ ရက်နှစ်ခုထဲ လေ ။ nokia 5800 or X6 က တော့ GSP အဆင်ပြေတယ် ။x6 ကတော့ ဓာတ်ပုံ ပိုကောင်းတယ် ။5800 က အကြမ်း ပိုခံ တယ် ။game ဆော့ မယ် ဆို samsung galaxy တွေကောင်းတယ် ။
blackprince က ဖုန်း ပြန်ကောက် လား.ဖုန်း ပြန် ကောက် ရင် ပြန်လာ ရင် ဖုန်း ၀ယ်ပြီး ပြန်
သွင်း ချင် လို့ ။ ဘာ phone အ မျိုး အ စား တွေ အ ရောင်း သွက် လဲ။
အကို ရေ ဖုန်း ကောက် ရုံး ရောက် တဲ့ ဗျ ။မန်းလေး မှာ တော့ ဖုန်း ကောက် တဲ့ ဆိုင် ရှားသွားပါပြီ ။တော်တော် ကြီး တန်ရင် တော့ စဉ်းစား ရမှာ ပေါ့ ဗျာ ။အရောင်းသွက်တာ က တော့ touch ဖုန်းတွေ ပါ ။
ကျေးဇူးပဲ blackprince ရေ rose လဲဝယ်ချင်နေတာ ပြပွဲ ကတည်းက ၀ယ်ဖို့ကြိုးစားနေသေးတာ။ 8သောင်းလောက်ဆိုရင် လဲ အဆင်ပြေပြေသုံးလို့ ရနိုင်တယ်ပေါ့။ စိတ်ကူးက။ စင်္ကာပူဖုန်း ဆိုတော့ပိုတောင်စိတ်ဝင်းစားနေတာ။ အဒေါ်ကလဲဝယ် ပါလားတိုက်တွန်းနေလို့။ ၀ယ်မိတော့မလို့။ အကြောင်းစုံ သတိပေးလို့ကျေးဇူးကျေးဇူး။ တကယ်တင်တယ်နော်။
ဟုတ်ကဲ့ ရပါတယ် ။yeyintaung777@gmail.com မှာ ဖုန်းနဲ့ ပတ်သတ်တာ မေး နိုင်ပါတယ် ။ကျွှန်တော် တို့ က လဲ ဖုန်းဆိုင်ဖွင့် ထား ပေ မယ့် လူ တွေ ကို အကောင်းပဲ ကိုင်စေချင်တယ် လေ ။ တရုတ် function နဲ့ တရုတ် ပစ်စည်းနဲ့ ဆို တော့ ဘာထူး မှာ လဲ ဗျာ ။ တရုတ် ဖုန်း ပဲ ၀ယ်ကိုင် လိုက် တောင် ခေါက်ဖုန်း လှလှ လေး တွေ မှ ၄၅၀၀၀ လောာက် ရှိ တာ .
ကျုပ် ကို ကူညီ ရှင်းပြပေးပါဦး
ကျုပ် က ဂျီအက်စ်အမ် ဖုန်းပေါ့ ။ နိုကီရာတစ်မျိုးဘဲ ပြောင်းလဲ ကိုင်ခဲ့တာ ဗျ
အခု ကိုင်နေတာ X6 , စပေါ်ကာစ က ဝယ်ခဲ့တာဗျာ ။
တစ်ခါတစ်လေ ၊ ကိုယ်ပြောတဲ့ စကားသံ ပျောက်တတ်တာကလွဲရင် ကျန်တာ အားလုံးအိုခေ တယ်ဗျ ။
တစ်ခု ရှိတာ က ၊ ဝယ်တဲ့နေ့ ကတဲက ယနေ့ ထိ ၊ ဘာဗားရှင်းမှ ထပ်မမြှင့် လို့ လဲ ဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပေါ့ဗျာ ။
ကျုပ် သိချင်တာလေး က
အခု ဟန်းဆက် အသစ် ဝယ်မလားလို့ 
နိုကီရာ ထဲ က ဘဲ ဝယ်ချင်တယ် ဗျာ
အခု လက်တလော မော်ဒယ် အသစ်များနဲ့ ၊ ကိုင်လို့ ကောင်းမယ့် နိုကီရာ လေးတွေ ကို
အားသာချက်/အားနည်းချက် ၊ ဈေးနှုန်းလေး များ နဲ့ ရှင်းပြပေးပါဦးနော်
Nokia ပိတ်သတ် ကိုကိုပေ ရေ့ …
Nokia Lumia 800 ပါ
100% recommend လုပ်ပါ၏
နိုခီရာ လူမီရာ 800…
အဲဒီ့ဟာ မြန်မာနိုင်ငံ အရောက်ကိုဘဲ စောင့်နေတော့မယ်
ဒါနဲ့ ၊ အင်ဇာ့ဂီ ရေ
ဘယ်အချိန်လောက် မြန်မာဈေးကွက် ကို ရောက်နိုင်လဲ
ကိုင်စေ ချင် တာ တော့ samsung galaxy ဖုန်း တွေ ပါ။ ဈေး က တော့ အစား စား ပဲ ။လိုင်း ကောင်းတယ် ။အကြမ်း ခံတယ် ။game ဆော့ ကောင်းတယ် ။ အများကြီး သွင်း ရတယ် ။ galaxy5= 165 / galaxy3= 170 / galaxy ace =190 /galaxy copper = 320000 / galaxy mini = 170 / /
ဟုတ်တယ်ဗျ ကိုမောင်ပေရေ. GSM တွေမှာတော့ရွေးချယ်စရာအများသားပါ။ဒါပေမယ့်ဗျာ
ကို black prince ကဘယ်ပျောက်နေတာလဲ မသိရဘူး။ကျနော်မေးထားတာလေး ဖြေပေးစေချင်လို့ ။
အားလုံး ပဲ yeyintaung777@gmail.com မှာဖုန်း နဲ့ ပတ်သတ် တာမေးမြန်းနို်င် ပါတယ် ။ http://www.mobilehouse.co.nr ကို လဲ လာလည် ကြပါလို့ ဖိတ်ခေါ် လိုက် ပါတယ် ။
စိတ်ကို ကုန်နေပြီး..ဖုန်းနဲပတ်သတ်ရင်.. အဟင့်…………..